Michel Djaozandry Mpilalao Malagasy mamiratra any Canada
Manana ny firazanana malagasy ary milalao ao amin’ny klioba Kanadianina divizionina voalohany, Atletico Ottawa, i Michel Djaozandry rehefa nahavita 3 taona tao amin’ny klioban’i St Hubert Club Soccer,
divizionina fahatelo ao an-toerana ihany. Vao 22 taona monja ny lehilahy kanefa dia efa nahazo fifanarahana amina klioban’ny baolina kitra isan’ny sangany ao an-toerana sahady. Mitana ny toeran’ny vodilaharana moa izy hatrizay ary raha ny nambarany dia naha latsa-dranomaso azy izao fiantsoana klioba sangany ny tenany izao sahady. Ezaka be, hoy izy, vao nahatody izany. Isan’ny nampiady saina ny mpitia baolina kitra Malagasy izay mety handimby an-dry Mombris sy ry Bapasy teo aloha teo ka inoana sy antenaina fa hanaiky handrafitra ny Barea tsy ho ela i Djaozandry.